eNasha.com - नेपाली तारादेखि दिल्लीसम्म
नेपाली तारादेखि दिल्लीसम्म
नाम: भविन ढुङ्गाना
जन्मः खाँदबारी, संखुवासभा
शिक्षाः एसएलसी खाँदबारी हिमालय माध्यमिक विद्यालय
ललितकला क्याम्पस, प्रवीणता प्रमाणपत्र तह
दिल्ली विश्वविद्यालय, स्नातक अध्ययनरत
बच्चैदेखि गाउँथे । विभिन्न प्रतिस्पर्धामा मैले आठ कक्षादेखि नै भाग लिन थालेको थिएँ । प्रायः म केही न केही जितिरहेकै हुन्थेँ । एसएलसी सकिएपछि राम्रो नम्बरमा पास भएका कारण घरबाट विज्ञान पढ्ने नै सुझाव थियो । तर आईएस्सीमा भर्ना भएपछि थाहा भयो, यो कति गाह्रो रहेछ ! पछि मैले थाहा पाएँ, मलाई त म्युजिकमा बढी रुचि रहेछ । र, विज्ञान अप्ठेरो लागेपछि विज्ञान पढ्न छाडिदिएँ । त्यसपछि म ललितकला भर्ना भएँ, सङ्गीत पढ्न ।
कलेज र सङ्गीत वातावरण
उति राम्रो सांगीतिक वातावरण नभए पनि साँझमा भेला भएर गीतार बजाउने चलन चाहिँ थियो, साथीभाइमाझ । मैले गाउँदा सबैले राम्रै स्वर छ भनेर साथीहरुले प्रतिक्रिया दिन्थे । रेकर्डिङ्ग गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरित गर्थे । तर मेरो जीवनमा साङ्गीतिक मोडको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो बनेर कान्तिपुर टेलिभिजनको सत्यस्वरुप शो आइपुग्यो । २०६१ सालमा यो शोमा भाग लिने अवसर पाएँ । यसले बाटो खोल्यो । सत्यस्वरुपसँग चिनजान भयो । यहाँ भाग लिएपछि यसले मेरो प्रतिभालाई चिनाउने अवसर दियो । यसको केही समयपछि नै नेपाली ताराको विज्ञापन भयो र त्यसमा भाग लिएँ ।
यसले मेरो जीवनमा परिवर्तन ल्याइदियो । सबैमाझ चिनायो, माया दियो । म्युजिकल सर्कलमाझ ठूलो परिधि र वृत्तको चिनजान गरायो नेपाली ताराले । सङ्गीतमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वासलाई यसले झनै मलजल गर्‍यो । अरु त अरु दिल्ली विश्वविद्यालयमा पढ्नसमेत यो प्रतियोगिताको ठूलो भूमिका रहृयो ।
त्यसो त ललितकलाका सिनियर कलाकारहरु भारतीय दूतावासबाट स्कलरशीप पाउने कुरा थाहा मैले पहिले नै पाएको थिएँ । पढाईसँगै म दिल्लीमा पढ्न अप्लाई गर्छु भुनेर सोचिरहेकै थिएँ । तर यसबीच नेपाली तारा सम्पन्न भयो र मेरो गायनलाई सबै नेपाली दाजुभाइले रुचाइदिनु भएर उत्कृष्ट पाँचभित्र पर्न सफल भएँ । यो सफलताको डकुमेन्ट पेश गरेपछि भारतीय दूतावासले मेरो निवेदनलाई स्वीकार गर्‍यो ।
दिल्लीको अनुभव राम्रो रहृयो, मिहिनेत ज्यादा गर्नुपर्ने वातावरण छ त्यहाँ । मूल भिन्नता त्यहाँ र यहाँको के पाएँ भने यहाँ साङ्गीतिक घराना नै छैन । तर त्यहाँ शास्त्रीय संगीतमा थुप्रै घराना छन् र हामीले दिल्ली घरानाको वृहद् अध्ययन गर्नुपर्छ । अध्ययनका लागि त्यहाँको वातावरण अझै राम्रो देखेँ मैले ।
दिल्ली शहरकै कुरा गर्ने हो भने दिल्ली गएको एक वर्षमा त्यहाँ धेरै गर्मीको अनुभव गरेँ । त्यसो त जाडो पनि कम हुँदैन । काठमाडौँमा त्यस्तो गर्मी हुँदैन, न त जाडो नै । शहरको कुरा गर्ने हो भने जनसंख्या, भौतिक संरचनाहरु पनि अत्याधुनिक छन् । त्यहाँका मान्छेहरु ज्यादै व्यस्त छन् । सबै कुरा व्यवसायिक छन् ।
थ्योरी र प्राक्टिस
त्यहाँ हामीले थ्योरी र प्राक्टिस दुवैमा उत्तिकै मिहिनेत गर्नुपर्छ । गायकका लागि रियाज निकै महत्वपूर्ण छ । तर रियाज सही रुपमा गर्नुपर्छ । अन्य थ्योरीका कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । दिन्दिनै नयाँ नयाँ आविष्कार भएका छन्, समस्याका कुरा छन्, समाधानका कुरा छन् । यी सबै कुरा थाहा पाउनु जरुरी छ ।
म दुइ महिने छुट्टिमा नेपाल आएको थिएँ । तर यहाँ आउने बित्तिकै सिनेमामा गाउने अवसर पाएँ । सैनिक सिनेमाका लागि सत्य-स्वरुपले मौका दिनु भएको छ । यसको दुइ गीत गाएँ । दुइ वटै गीत समूह गायन छन् । एउटा सैनिक... टाइटल । अर्को बाइरोडको बाटो... । फिल्ममा गाउँदा अन्यभन्दा फरक अनुभव रहृयो । र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सिनेमाको कथाको वातावरणमा ध्यान दिनुपर्ने । धेरै फ्रि भएर गाउन पाइँदैन । भावलाई बुझेर गाउनु पर्दोरहेछ । जे होस्, अनुभव रमाइलो रहृयो ।
एल्बम निकाल्ने कुरा
धेरै साथीहरुले त्यहाँ सिकेका कुरालाई समेटेर एल्बम निकाल भनेर सुझाव दिइरहेका छन् । तर खासमा भन्ने हो भने त्यहाँ गएर मेरो सोच अझै वृहद् भएको छ । सिक्नु र सोच्नुपर्ने कुरा धेरै छ भन्ने लागिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अझै थप केही कुरा जानिसकेपछि मात्र एल्बम निकाल्छु भन्ने सोचमा छु । तर पनि श्रोतासँग मेरो ग्याप धेरै लामो नरहोस् भनेर अर्को वर्ष आउँदा एउटा एल्बमका लागि चाहिने खुराक लिएर आउनेछु भन्ने सोचेको छु । हेरौँ, कहाँसम्म सफल हुन्छु ।
संगीत नै हो मेरो जीवन । यसबाहेक अरु कुनै चाह छैन । अब मेरो जीवन यसैमा बित्नेछ । दिल्लीले सिकाएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाठ के भने- नेपालको साउण्ड क्वालिटी कम रहेछ । मिहिनेत को अझै कमी पो छ कि जस्तो लागिरहेको छ । कोसिस चाहिँ भइरहेको छ । तर उत्कृष्ट उत्पादन चाहिँ हुन बाँकी नै छ, चाहे त्यो रेकर्डिङको कुरामा होस्, चाहे अन्य विविध आयामका पक्षमा ।
नेपाली ताराका प्रतिष्पर्धीहरुसँग रेडिशन होटलमा ऍक साँझ । भविन सबैभन्दा दायाँ ।
गायक उपलब्धि सङ्गीतकार लुकेका कुरा रिलिज ट्रयाक बाहिर समुद्रपार नेपाली तारा क्या बात ! कीर्तिमान तातोपीरो अवार्ड भिडन्त विचार पेज थ्री गायिका प्रेम र विवाह रुचि कन्सर्ट हल्ला